JINGHPAW KASA: USA WZC NI HPYEN YEN NI HPE GARUM
USA WZC NI HPYEN YEN NI HPE GARUM
US Mungdan du World Zomi Congress (WZC) kawn Jinghpaw Mungkata Majanamajaw jam jau hkrum nga ai hpyen yen tsin yam niamatu alu sak jaw ai lamang hpe January (28) ya shani USA mungdan Dallas na Vickery Baptist Church kaw galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. (WZC)aAmu Madu Slg. Pu Thang Lian kawn (WZC)ayaw shada ai lam hte tsin yam ni hpe garum shingtau la ai lamayaw shada lam ni hpe tsun dan lai wa nna, Slg. Cinpu Zomi kawn tsin yam ni hpe garum alu US$ 13,013.90 tup hpe ap ya lai wa sai lam na chye lu ai. JLH Amu madu Slg. Lahtaw Zau Yin kaw (WZC) hpe chyeju dum ga tsun lai wa sai lam na chye lu ai.
အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် ချင်းလူမျိုးများ World Zomi Congress (WZC) မှ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီ (၂၈) ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas Dallas မြို့ရှီ Vickery Baptist Church တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် (WZC) အတွင်းရေးမှူး Mr. Pu Thang Lian မှ (WZC) အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကချင်အမျိုးသားများနှင့် ချင်းအမျိုးသားများမှာ ရှေးယခင်တည်းက ညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြောင်း တစ်ဦးဒုက္ခရောက် နေလျင်တစ်ဦးက ကူညီပေးရမည့်တာဝန်ဝတ္တရာရှိကြောင်း၊ ကေအိုင်အိုမှ ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက် စစ်အစိုးရနှင့်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကို (WZC) မှအပြည့်အ၀ ထောက်ခံကြောင်းနှင့် နောက်နှောင်များတွင်လည်း ဆက်လက်ကူညီပေးသွားမည်ဟု ပြောကြားသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့နောက် Mr. Cinpu Zomi မှ ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက်အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃,၀၁၃.၉၀) တိတိကို ကချင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီသို့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အလှူငွေများကို ကချင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကောက်မတီ အတွင်းရေးမှူ ဦးလထော်ဇော်ရင်မှ လက်ခံပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
UA WZC hkang hpu nau ni hpe Jinghpaw yawngamalai grai chyeju dum ga ai, an hte jinghpaw ni pyi garaum na ngun nlu nga ai ten hta karai kasangajachyum mungga hpe hpring tsup kabrat hkra hkam la lu nga ma ai tsawra myit hpe, madun dan ai majaw grai chyeju kaba la sai an hte ngam nga ai jinghpaw hpung shagu hpe gasi madun dan sai majaw bai ga htap chyeju dum ai lam tsun mayu nngai,karai kasang gaw nan hte hpe lamu hkawat ching hka hpaw nna garau ai shaman chyeju ru jaw ya nga u ga akyu hpyi myit dum nga na re,GOD BLESS WZC.
Hi CinPu friend .. U did good job.God bless u all!!Thanks alot !!
thank you very much Chin Brothers/Sisters for your donation along the hard period to survive for... we give thanks God for showing us His Love, mercy and care through Chin People. May the Love, Peace and Joy of God be abide upon all Kachin and Chin people in long relationship.
Victory to Zogam-Wunpawng.